हामी गुगलका दास- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
हामी गुगलका दास
अहिलेकालका विद्यार्थीलाई कुनै निश्चित सङ्ख्या कति हो भन्यो भने अकमकिन्छन् र अङ्ग्रेजीमा कति हो भनेर सोधी हाल्छन् । मातृभाषामा दखल भए धेरैवटा विदेशी भाषा अझ चाँडो टिप्न, सिक्न सकिन्छ भन्ने कुरा अनुभवसिद्घ छ ।
माघ २६, २०७५ रामेश्वरप्रसाद बराल
काठमाडौँ — नवजात संसारमा आउँछ च्याँहार–च्याँहार गर्दै । यो शिशुको प्रथमस्वर हो । हामी हर्षले गद्गद् हुन्छौँ ।
यतिखेर उसको गतिविधि सुनाउन्यैमा सीमित छ । ऊ रुन्छ—सुनाउँछ, खान्छ, सुत्छ, लम्पट फोहोर पार्छ । फेरि रुन्छ—सुनाउँछ, फेरि खान्छ, फेरि सुत्छ । केही काल यो चक्र यसैगरी चल्छ । आँखामा ज्योति भरिन्छ, अनि आमा र नजिककालाई देख्छ र हाँस्न थाल्छ । शारीरिक विकास हँुदै जान्छ । यतिखेरसम्म बोल्दैन, छेउछाउ संगत खोज्छ । अब कानले प्रतिक्रिया दिन थाल्छन् । संगतमा रहेकाबाट ध्वनिको अन्तर बुझ्छ । आमाका पाइलाको चाल र बोली थाहा पाउँछ । सबै क्रियाकलापमा उसले सामाजिकता झल्काएको बुझिन्छ । सर्वविदित छ, ध्वनिले उसको भाषागुणमा प्रभाव पार्ने र सिकाउने कर्म गर्दै आएको हुन्छ । उसमा भाषा विकास हुँदै जान्छ । भाषाको ज्ञान यसरी विकास भयो भएन, आपैंmमा पनि घटाउँदै हेर्न सक्छौँ ।
भाषाका चारै खुड्किला —सुन्ने, बोल्ने, पढ्ने र लेख्ने — उत्तिकै पेचिला छन् । प्राज्ञिक जगत्मा सबैको उत्तिकै महत्त्व छ । यी चारै मिलाएर सिकारुले बुुझ्ने र बुुझाउने अर्थात् भाषिक सन्देश क्षमता अँगालेकोमा पर्छ । पहिला दुई औपचारिक ज्ञानबिना पनि सबैमा रहेको हुन्छ । यिनमा कसैको कत्तिको सीप छ भन्ने पक्ष अर्को हो । शिक्षामा चेतना अभियानले यी सीपमा अहिले व्यापक विकास हुँदै आएका छन् । तथापि यिनका चर्चा र परीक्षण शैक्षिक ज्ञानबाट गरिन्छ । यसैलाई पाठशाला शिक्षा भनिन्छ ।
सुन्नु भाषाको पहिलो गाँठो हो । पशुुपन्छीदेखि ध्वनि थरीथरीका हुन्छन् र मान्छेका थरीथरी स्वर र सन्देश हुन्छन् । यो गाँठोमा यी सबै सुुन्ने, चिन्ने र मगजले अथ्र्याउने र बुझ्न सक्ने क्षमताको विकास हुन्छ । बोल्नु दोस्रो हो । शिशुले तीन वर्षको पुग्दा–नपुग्दा बोल्ने क्रम सुरु गर्छ । उमेर बढ्दै जान्छ । अनि लामा वाक्य र नौला शब्दसमेत बोल्दै जान्छ । उसले यसमा देखासिकी गरी राख्छ ।
वाचा फुकाउनु, बोल्नसक्ने बन्नु वा बनाउनु भाषाको पहिलो धर्म हो । भाषाबिना उसको भोक, निद्रा, शौचजस्ता दैनिकी पूरा हुँदैनन् पनि । त्यसैले ऊ भाषा प्रयोग गर्छ, यसमा नक्कल गर्छ, स्वाङ पार्छ, चित्त नबुझ्दा गन्गन्देखि खुसीमा गीत पनि गुन्गुन् गर्छ, अर्काको झैँ गीतमा लय हाल्छ, नाच्छ, नाचको भावभङ्गिमा देखाउँछ । प्राथमिकदेखि माध्यमिक कक्षासम्म यो चली राख्छ । यो सिकारुको भाषा विकास हो । ज्ञानमा उखानटुक्का र गाउँखाने कथाहरू मिसिंदै जान्छन् । यी समस्त सीप र ज्ञान उसको आफ्नै संस्कृतिमा अडिएको हुन्छ ।
भाषिक क्षमताले नौला कुराको इच्छा पनि सँगसँगै जताउँछ, जस्तो उसले खाँदा, सुत्ने वा बिसन्चो बेलामा कथा सुन्न चाहन्छ । यसको अर्को अर्थ उसमा सुन्ने र ध्यानकेन्द्रित हुुने क्षमतामा क्रमिक विकास हो । त्यसैले प्रारम्भमा कथा उसैका वरिपरि भएका विषयवस्तु मिलाएर आपैँm कथेर भन्न सक्नु बढी उपयोगी हुन्छ । सुनेको विषयवस्तु उसले के कति बुझ्यो, सोध्दा उसकै लवजमा कति फिर्ता गर्न सक्छ, यो उसको परीक्षा बन्न सक्छ । एक सयमा पाँच मात्र पनि उसले सुनेको कुरा फिर्ता गर्न सक्यो भने यसलाई उत्साहबद्र्घक ठान्नुपर्छ । उसको सम्झना तिखार्ने र भाषासिकाइको क्रम यही हो ।
सुन्ने र बोल्ने संयोग एकपछि अर्को आउँदै जाने कार्य हो । यो जति चाँँडो आउँछ, त्यो बोलीमा सीप हो । यी सबैको फेरि अर्थ हो— शिशु अहिलेसम्म घरपरिवारको जतन र स्याहारमा छ । अत: शिशुको पहिलो भाषाशाला उसको घर हो । उसले सुन्छ, त्यही नक्कल गर्छ र सिक्छ । त्यस्तै देखासिकी भन्ने शब्दको उल्लेख गर्दा यो देख्ने (हेर्ने पनि) र सोहीबमोजिम सिक्ने हो । उसले हेर्छ वा देख्छ र सिक्छ, अनि त्यही दोहोर्‍याउँछ र त्यो उसको बानी बन्छ । वर्तमानमा विद्युतीय उपकरण (टीभी, कम्प्युटर, आइप्याड, मोबाइल आदि) छुट्ट्याउन नमिल्ने र छिमल्न नसक्ने भएको छ । भनौँ, हामी यसलाई किन्छौँ र यथार्थमा ‘गुगल’ का दासजत्तिकै बन्छौँ । यसले हामीलाईआफ्नो समय एकातिर बेच्छ भने अर्कातिर यो हाम्रो टाँसो लागेको हुन्छ । जागा अवस्थामा यो ५/१० मिनेट पनि आफूबाट टाढा रहे छटपटी हुन्छ र चैन गुुमेको लाग्छ । शिशुमा यसले अझ गहिरो छाप छोडेको छ । कति पटक के पनि देखिएको छ भने यो उपकरण उसका हात वा आँखाअघि तेर्सिएकै हुनुपर्छ । ऊ यसैमा केन्द्रित हुन्छ र एकोहोरिन्छ । अझ कामकाजी आमाहरू उसलाई यसैमा अलमलिन छाड्छन् र सुसेधन्दा भ्याउन खोज्छन् । तर, उदेकलाग्दो त के भने बालकले यसबाट पनि केही न केही सिकेकै हुन्छ । चार वर्ष छोएको शिशुले यसरी सिक्न पनि सक्छ । उसले जन्मदिनलाई ‘ह्यापी बर्थ डे’, अनि माग्छ ‘सप्र्राइज गिफ्ट’ ।
विद्युतीय प्रविधिलाई अहिले दैनिकीबाट गिंडेर झिक्न सकिंदैन । बरु यसको उपयोगले भाषामा चाँडो फड्को मार्न सिकाउँछ । यो माध्यमले कपुरी क, आँखे ख, गाईगोडे ग आदि साउँअक्षर गीतिलयमा झन् छिटो सिकाउन सकिन्छ । बिलकन्ने, कान्नानी, बाइमात्रे आदि शब्दहरूले क्रमश: अ, आ, इ र यसैगरी अगाडि अ: सम्मका स्वरवर्णहरू बुझिन्छ । यसै क्रममा शिशुले अन्जानमै सरल बालबोलीका पद्य सिलोक हालेर घोकी सक्छ । (जस्तै— सानो–सानो घोर्ले पर्खालबाट ओर्ले...। सासू भन्छे बुहारी π बुहारी भन्छे ज्यू π सिङ्माङ्मा राखेको कसले खायो घ्यू ? आदि) ।
बोल्ने र सुन्ने कर्ममा अरू विषयज्ञानसमेत थप्दै लैजान सकिन्छ । यसमा अंक गिन्ती शिशुले ख्यालख्यालमै सिक्तै जान्छ । उदाहरणमा— एक लौरो टेक्, दुई नानी बुुई, तीन छेपारो छिन्, आदि । आज क्यालकुलेटरबिना पनि चलनका साधारण जोड, घटाउ, गुणन, भागफल र किनमेल गर्दा प्रतिशतमा पाइने छुट कति जना मुखैले हिसाब गर्न सक्नेमा पर्छन् । अहिलेकालका विद्यार्थीलाई कुनै निश्चित सङख्या कति हो भन्यो भने अक्मकिन्छन् र अङ्ग्रेजीमा कति हो भनेर सोधिहाल्छन् ।
वरिपरिका चीज वस्तु वा पशुपन्छीमा शिशुले उत्तिकै चाख राख्छ । हरेक पटक ‘किन ?’ भन्ने प्रश्न उसको मुखैमा झुन्डेको हुन्छ । यस्तै ‘काग’ लाई त्यो ‘काग’ हो भनेर उसले एक पटक मात्र सुनेर चित्त बुझाउँदैन । त्यो के ? भनेर दसौँ पटक सोधिराख्छ । यस्तो प्रश्नको पेटारोमा चित्त बुझाउन सक्नु अभिभावकको जिम्मा हो । यो उसको सामाजिक, सांसारिक ज्ञानबारे उत्सुकता पनि हो ।
यसैले साउँअक्षर र अंक चिनाउनुअघि मान्छे, जनावर, रूख, पात, हाँगा, चराचुरुंगी, किताब, कलम, मेच, गाडी, खाद्यसामग्री (चामल, भात, चिया आदि) थरीथरीका चित्र चिनाउनुपर्छ । सही ज्ञान बढाउँदै लैजान झुक्याएर सोध्ने वा बिरालो देखाएर कुक्कुर भन्ने अठ्याङ् पार्न सकिन्छ । ज्ञान थपिंदै जाँदा पछिपछि पुस्तकको पाना शिशु आपैंmले पल्टाएर समेत कुन पानामा के छ र कतिवटा छ, हामीलाई चिनाउन सक्ने भइसक्छ । हुन त यतिखेरसम्म अक्षर वा अंक लेख्न सुरु गरेको हुँदैन तर धेरै मात्रामा ठम्याइसकेको हुुन्छ । पढ्नु भनेको सजिलो छैन । पढ्न सक्नु र दोहोर्‍याई तेहेर्‍याई पढ्नु भाषाको तेस्रो सीप हो ।
खण्डित वा आधा अक्षर र यीबाट बनेका जटिल संयुक्ताक्षर ज्ञानमा लामो अवधि जान सक्छ । त्यसैले लेख्न होइन, यी सबै देखाएर चिनाउने र चिन्ने बनाउनुपर्छ । मन्टेसरी र किन्डरगार्टेनले यस्ता विशेष वर्णमा विचार पुुर्‍याउनु उपयुक्त छ । विद्यालयको कुशलता पनि यही हो । गृहकार्यको ढाक्रेडोको पिठ्युँमा थोपरेर न शिशु, न अभिभावक कसैलाई राहत मिल्दैन । बरु यसले शिशुलाई पढ्ने होइन, पढ्दै नपढ्नेतिर घँच्याड्न र जिराहा बनाउन सक्छ ।
लेख्ने चौथो सीप हो र यो सबभन्दा पछि आउँछ । यो चौथो क्रममा हुने सीप हो र सट्टामा पहिले खाली पाटी वा पानामा कोर्न लाउने हो । जे मन लाग्छ, शिशुले कोर्दै जाओस् † यसको तात्पर्य कलम वा पेन्सिल समात्न सिकाउनु हो । यसपछि रेखाचित्रमा रङ्लाउने पेन्सिल दिएर रङ भर्न लाउँदै गर्नुपर्छ । अब क्रमश: अंक, अक्षरहरू उसका नजरमा चित्रसरह आउँछन् । अक्षरमा (माथि लाउने–) डिको, मात्रामा कान्नानी, ह्रस्व, दीर्घ, एकलख, दबासविन्दुजस्ता पहिले नै सिकाएर स्वरवर्णको ज्ञान दिने र त्यसपछि व्यञ्जनवर्ण सिकायो भने शिशुका मगजमा छर्लंग हुन थाल्छ । यस्ताका चित्र लेखाएर उसमा नयाँ ज्ञान लिन सजिलो पार्नुु हो । बानी परेपछि अब अक्षर, अंकहरू कोर्न, लेख्न लाउनुपर्छ ।
यी कुराबाट शिशुुले लेख्न सुरु गर्ने सही उमेर के हो ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । मेरो अनुभवमा पाँच वर्ष नाघ्न लागेको शिशुले आफ्नै रौस र हौसलाले एकै दिनमा गिन्तीका तीसदेखि एक सयका अंक र सोही दिन दुईको दुनोट कण्ठ पार्न सकेको पाएको छु । अर्थात् यस्तो उमेरअघि लेख्न सिक्ने कार्य उति फलदायी नहुन सक्छ । मजबुनमा, लेख्ने भनेको पहिले राम्ररी कलम समात्न सिकाउने हो र माथि भनेजस्ता नानाथरी चित्र कोर्न लाउने हो । लेख्ने कार्य बोल्न, सुन्न र अक्षर–शब्दहरू राम्ररी चिनेपछि गरायो भने शिशु मनैदेखि सिकौँको भावनामा लाग्छ र जाँगरिलो बन्छ, अनि उसलाई लेख्न सजिलो र हलुका हुन्छ । पूर्वप्राथमिक पाठशालाको सिकारुका लागि लक्ष्य यही हो । भाषा सीपमा यो बढी उपयुक्त मान्न सकिन्छ ।
प्रकाशित : माघ २६, २०७५ १२:१२
परीक्षा पाटो मात्र होइन भाषा
मंसिर २२, २०७५ रामेश्वरप्रसाद बराल
काठमाडौँ — शिशु मस्तिष्क उघारो र लचिलो हुन्छ । एकभन्दा बढी भाषा जान्न सक्दा उसले आफूलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । बहुभाषाले उसमा बढी सोच्ने–बुझ्ने, तिखौरे बन्ने, सम्झिने वा मस्तिष्कमा सँगालिराख्ने क्षमता थपिन्छन् ।
राम्रा विद्यार्थीको परीक्षाफल पनि राम्रो हुन्छ । विद्यालयतह पार गर्दा यिनको प्राप्तांक ८० देखि ९० प्रतिशत र अझ माथिसमेत उक्लिन्छ जुन लरतरो होइन । यो देख्न पाउँदा अभिभावक र गुरुवर्ग भुइँमा न भाँडोमा हुनु स्वाभाविक हो । तर, प्राप्तांक उदेकलाग्दो र आँखा टट्टाउने गरी पनि खुल्छ । दुई–तीन दशकयताका अङ्ग्रेजी र नेपाली विषयहरूमा प्राप्तांक दाँजेर समीक्षा गर्दा एउटा असहज र अनमेल चित्र झल्किन्छ । यो हो, धेरैजसोको अङ्ग्रेजीमा बढी तर नेपालीमा थोरै अंक देखिनु । कहिलेकाहीँँ निकै थोरै र निकै धेरैको अन्तरसमेत हुन्छ ।
यसमा ‘कस्तो ठेप्लो, अधकल्चो ज्ञान !’ भन्न मिल्दैन र परीक्षार्थीको मातृभाषामा दखल रहेन पनि भन्न सुहाउँदैन । एक किसिमले हेर्दा उसले अङ्ग्रेजी पढ्ने/सिक्ने अङ्ग्रेजी कक्षाको अवधि मात्र हो । अनि यहाँ प्रश्न उठ्छ— के त ऊ कक्षा बाहिरसमेत अङ्ग्रेजीका संगतिमा हुने गथ्र्यो र यसमा चाहिँ बढी ल्याउन सक्यो ? के यो उसको पहिलो भाषा (मातृभाषा) हो ? कि नेपालीमा पठनपाठन वा सिकाइ, सधाइ गतिलो भएन वा प्रश्नपत्र अङ्ग्रेजीजस्तो अंक पाउनेखाले भएन ? उत्तरमा भन्नुपर्दा पहिलो चिन्तन ठीक होइन र दोस्रो तर्कसंगत छैन किनभने यसले विवाद निम्त्याउँँछ ।
हाम्रा प्राथमिक विद्यालयहरूमा यता दुुई–तीन दशकदेखि भाषाशिक्षामा आफ्नै चलन भित्रिएको छ । बाह्रखरीमा पहिले नै अङ्ग्रेजी सिकाउने ढर्रा आयो । मन्टेस्सरी वा किन्डरगार्टन नामधारीहरूमा पहिलो दिनदेखि नै शिशुले ए फर यापल्, बी फर ब…ल सिकेर रमाउँदै घर फर्किन्छ । बाबुआमा दंग पर्छन् । विदेशी भाषा चाँडो टिप्न सकेकोमा दंग पर्नु स्वाभाविक पनि हो । उही शिशु फेरि घरपरिवारमाझ मातृभाषामा खेली, हाँसी, रोई गर्छ । यसरी देख्दा उसले दुइटा भाषा सँगसँगै सिकिराखेको हुन्छ । बढ्ने हुर्कने क्रममा विद्यालयतह पनि पार गर्छ । कतै झ्वाट्ट बोल्नुपर्दा उसले ‘पहिले अङ्ग्रेजी सिक्यो र पछि नेपाली’ भने सुुहाउँछ । उता भने दुवैको परीक्षा अंकभार समानरूपले एक सयको हुन्छ । यहाँ दुवै भाषा उत्तिकै श्रेयष्कर भन्ने पनि प्रस्टिन्छ ।
यथार्थमा भाषा एक माध्यम वा सेतु हो जसले विविध विषय सिक्ने, पढ्ने वा सजिलो पार्ने काम गर्दछ । अनुसन्धानले के देखाएको छ भने एकभन्दा बढी भाषा जान्नु विशिष्टता पहिल्याउनु हो । शिशु मस्तिष्क उघारो र लचिलो हुन्छ । एकभन्दा बढी भाषा जान्न सक्दा उसले आफूलाई अझ फराकिलो बनाउँछ । अत: बहुभाषाले उसमा बढी सोच्ने–बुझ्ने, तिखौरे बन्ने, सम्झिने वा मस्तिष्कमा सँगालिराख्ने क्षमता र नौला संस्कृति थाहा पाउनेजस्ता गुण थपिन्छन् ।
राम्रा विद्यार्थीको बढी ध्यान अङ्ग्रेजीले लिएको देखिन्छ । अङ्ग्रेजीका दाँजोमा नेपाली लेख्न अलिकति बढी औंंला घोट्नुपर्ने हुन्छ । नेपालीका प्रत्येक सानाठूला शब्दमा डिको (ऊध्र्वरेखा) हाल्नेदेखि संयुक्ताक्षर/अद्र्घाक्षर र विन्यासलगायतमा आँखा पुर्‍याउनुपर्छ । त्यसो त अङ्ग्रेजीले नियम नखोज्ने होइन । उसको नेपालीमा चाख कम भयो र थोरै आयो रे भन्दैमा दोष दिने ठाउँ पनि छैन । कुराको चुरो अर्कै छ । अङ्ग्रेजी बोल्नु वा यसको क्षमता हुनु सामाजिक प्रतिष्ठा हो भने अर्कातिर बेलाइत, अमेरिका र अस्ट्रेलियाका विश्वविद्यालयमा प्रवेश पाउने तयारीसमेत हो । तथापि यहाँ विद्यार्थीको चाखभन्दा पनि भाषामा टेक्ने–समाउने हाँँगाको चर्चा बढी उपयुुक्त छ ।
तोतेबोलीदेखि नै मान्छेमा भाषा सिक्ने क्षमता असीम हुन्छ । अनुसन्धानले भन्छ ऊ जीवनकालमा पच्चीसवटासम्म भाषामा प्रवीण हुन सक्छ । अनि भाषा कस्तो हुनुपर्छ त ? जवाफमा— मात्र यसैका मापदण्ड यसका सही टेका हुन् । धेरै परिवारमा अचेल शिशुले पढे–लेखेकाको निगरानी पाउँछ । थपमा, यस्तो परिवारका भाषा माझिएको हुन्छ र यहाँ फाट्टफुट्ट अङ्ग्रेजीे पनि चल्छ । टेलिभिजनको सजिलो पहुँचले यसमा हिन्दीसमेत फेरि नौलो रहँदैन । हिन्दीको महत्त्व उसै पनि कम छैन ।
परिवारमाझ शिशुले बोल्ने तालिम पाइरहेको हुन्छ । उसका पारम्परिक लवज यी पनि हुन्—
‘हाक्की ! हाक्की !, सु ! सु !, नुनु !, को खाइ !
को खाइ !’ आदि ।
अझ लामा वाक्यांंंशमा ‘बबो बाँ !, बुबु दे !,
बटेमा !, बाबुलाई !,
हेर, ऊ ! मने, मने ! (बाख्राको पाठा/पाठी),
आइज चरी, काटौँ कान !’’ आदि ।
यतिखेर काखेभाषाबाहेक बाहिरी प्रभाव हँुदैन । जब ऊ पाठशालाका खेलसमूूहमा मिसिन्छ, उसमा क्रमश: नयाँनयाँ पद र लवजहरू थपिन थाल्छन् । पुरानो चलनमा अक्षर, मात्राहरू गीतिलयमा पढ्ने/पढाउने काम हुन्थ्यो । जस्तो, अहिले अनौठो लागे पनि पचास वर्षअघिसम्म अदालतमा तमसुक भाका हालेर भट्टयाइन्थ्यो । तात्पर्य, यसरी पढ्दा आफ्नो पाठ चाँडै कण्ठ गर्ने र शिशुको मगजमा चिरकालसम्म बसिराख्ने पनि बन्थ्यो ।
पाठशाला शिशुको अभिन्न थलो हो । यसले आहारपछि उसका भाषाको स्याहार गर्दछ । यस्तोमा सार्थक भनेकै मातृभाषी गुरु हुुन् । गुरु अनुभवी वा तालिमप्राप्त रहन्छन् । दोस्रोमा शिक्षण सामग्री वा पाठ्यपुस्तक हो । सिकारुले आफैँ सिक्ने मौका पाउनु, यस्तो प्रेरणा र वातावरण पाउनुले सिकाइतिर ऊ झन् खारिंंंदै जान्छ । कक्षामा नाचगानजस्ता क्रियाकलापमा गीतका बोलले स्वत: भाषा सिकाइरहेको हुन्छ । भर्खरैको एउटा नौलो प्रयोगमा स्मार्ट बोर्ड पनि हो । हुन त यो खर्चिलो छ तर गतिलो माध्यम हो ।
पाठ्यक्रमका घेराले मात्रै भाषाको स्तर भ्याउँदैन र पाठ्यांंश घोकेर मात्र पुग्दैन । त्यसैले शिक्षकको निगरानीमा बोल्न/वक्तृत्व सिकाउँदै लगिन्छ । साथसाथै अतिरिक्त पठनमा केही समय भए पनि बाहिरी ज्ञाननिम्ति कथा–कविताका पुस्तकवाचन गर्नेे, नाटकमा भाग लिने, चलचित्र देखाउनेजस्ता अभ्यास गराइन्छ । पछि यिनैबारे कुनै न कुनै तवरले चर्चा गर्ने, के कति बुझ्यो वा बुझ्न सक्यो भन्ने सोधपुछ गर्ने, र शिक्षकले यसो गर्ने– उसो गर्ने भन्ने सिकाइराखेका हुन्छन् ।
उमेरसँगै अझ माथिल्ला तहमा क्रमश: अक्षर, अक्षर उच्चारण, मात्रा, ह्रस्वदीर्घदेखि लिंग, वचनजस्ता तत्त्वसमेत थपिंदै जाइन्छ । यो क्रम कक्षा आठसम्म चलिराख्छ । यसपछि उसमा अतिरिक्त विषयहरूको ज्ञान थप्न र बढाउन सहज हुन्छ । माथिल्ला कक्षामा भाषाले व्यावहारिक/उपयोगी मार्ग लिंदै अघि बढ्छ । अन्यथा त्यसमा त्रुटि, अशुद्घि र छ्यासमिसे गुण थपिंंँदै जान्छन् । यो प्रसंगमा अंग्रेजीबारे भन्नुपर्दा जर्ज बर्नार्ड शअ्कालको बेलाइतमा अङ्ग्रेजी भाषा शिक्षित र अशिक्षितमा विभाजित थियो । उनको नाटक ‘पिग्म्यालियन’ मा एउटी पूूmलबेचुवी पात्रलाई बोल्ने तालिम दिएको देखाइएको छ । यसको अर्थ जुनै पनि भाषा पढ्गुुन गरेपछि स्तरीय हुन्छ ।
यहाँ बिझ्ने/खट्किने कुरा एउटा अर्को पनि छ । त्यो हो भाषामा आधिकारिकता । यसले भाषाको स्तरीयता कायम गर्छ । सर्वप्रथम भाषानीति स्पष्ट र बुझ्नलायक हुनुपर्छ । भाषा ठेट होस् भन्न र छ्यासमिस हुन नदिन अरू भाषाका नियामकले पनि उस्तै किसिमले निर्देशन एवम् नियन्त्रण गरिराख्छन् । यसले एकातिर भाषामा एकरूपता आउँछ भने अर्कातिर यसको सूक्ष्म विकासक्रम पनि अध्ययन भइरहेको हुन्छ । यो भनेको सबै तरहले दृष्टि पुर्‍याउनु हो । त्यस्तो दृष्टि नपुगेकामा हालमा चलनचल्तीका एक–दुई पदहरू लिन सकिन्छ— नेपालको राजधानी नामको शब्द विन्यास । अहिले यो विभिन्न विन्यासमा आएको छ— काठमान्डू, काठमाण्डौ, काठमान्डौ, काठमाडौँ, काठमाण्डौंं, काठमान्डो, काठमाडौंं, काठमाडौँ आदि । यथार्थमा ‘राजधानी महानगर’ को नाम विन्यास किटानी गरिदिंदा सबैलाई सजिलो हुनेछ । त्यस्तै, ‘हामी श्रीमान्/श्रीमती हौं’ का ठाउँमा ‘पति/पत्नी हौं’ भन्ने चिनारी प्रस्ट अर्थ खुल्ने र शोभनीय हुन्छ ।
भाषा चुनौतीमय हुन्छ । यसमा छेकबार र गलपासो भिर्ने होइन सट्टामा आधार खडा गर्नुपर्छ । कारण, हामीसँग यसको आधिकारिक नियामक/निर्देशक सूत्र छैन जसको खट्टै खाँचो भइसक्यो । यस्तो निकायले कार्यमूलक विद्वान्समूहको समन्वय/सहकार्य खोज्छ र यसमा धेरै अंगको काम पर्छ— शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालयहरू र यिनका शिक्षक, भाषा/साहित्य प्रतिष्ठान/प्रकाशनगृह, कानुन र सञ्चारकर्मीहरू, जहाँ भाषाको निरन्तर उपयोग छ । अत: गर्ने कार्यहरूमा यसले पहिलो, जुटेर व्याकरणमा शोध गर्ने र सोहीअनुरूप शब्दकोश सम्पादन गर्ने, दोस्रो, यिनलाई विद्युतीय सञ्चारबाट हेर्न/पढ्न सजिलो बनाउने, तेस्रो, दूरशिक्षा शिक्षणबाट रेडियो, टेलिभिजनमा प्रसार गर्ने । हालसालै औन–लाइन् र युट्युबको चलन पनि लोकप्रिय बन्दै आएको छ । कुनाकन्दरा, भीरपाखामा यस्ताको उपयोगले शिक्षकहरूको सीप र आत्मबल थपिनेछ ।
यता–न–उतिको पीडा खेप्ने आखिरमा विद्यार्थीले नै हो । राष्ट्रका कुनाकाप्चासम्म उनले एकै ढंगबाट सिक्न, पढ्न पाए भने प्राप्तांक उसै उक्लिन्छ तथा सहर र गाउँको भाषादूरीसमेत मेटिन्छ ।
प्रकाशित : मंसिर २२, २०७५ ०८:४२